आफ्नै नेता भण्डारी–आश्रीतको हत्यारा नखोज्नेले, निर्मलाको हत्यारा किन खोज्थे ! – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ३, शनिबार १४:२५ [post-views]
खेमराज अधिकारी/थप्रेक, तनहुँ । आफ्नै नेता मदन भण्डारी र जिवराज आश्रीतको हत्यारा नखोज्नेले निर्मलाको हत्यारा किन खोज्थे। सिमाना मिचिंदा कुटनैतिक पहल गर्न नसक्नेले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न के सक्थे र ।
कम्युनिस्ट साम्यवाद अन्तिम लक्ष्य राख्नेले लोकतान्त्रिक वयवस्थाको किन सस्थागत विकास गर्थे । संंस्थागत अपराध र भ्रष्टाचार गरेर बेइमानी तरिकाले नव सामन्ती धनाढ्य हुनेहरुले किन लोकतान्त्रिक शुसासन कायम गर्थे । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा नचल्नेहरुले अरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पाठ सिकाउने नैतिकता किन राख्थे ।
राष्ट्रियतालाई शिरमा राखी राष्ट्रिय एकता कायम गरि परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नसक्नेले के को सिमा सुरक्षा गर्न सक्थे र । राजनीतिको नाममा अपाराध एवं भ्रष्टाचार जन्य कामको ढाकछोप गर्नेले के को स्वतन्त्र न्याय र मानवता बचाउन सक्थे र।
अपराध र भ्रस्टाचार लाई राजनितिकरण गर्नेले के को लोकतान्त्रिक शुसासन कायम गरि आम नागरिकलाई लोकतन्त्रको महसुस दिन्थे ।
सत्ताका लागि हिंसा, हत्या मच्चाउनेले किन लोकतन्त्रको सस्थागत विकास गर्थे । गरिवको नाम बेचेर नव सामन्ती धनाढ्य हुन पलकेकाले किन शिक्षा स्वस्थ्य र रोजगारी मा आम नागरिकको पहुँच हुने कार्यक्रम दिन्थे र।
त्यसैले राजनितिको नाममा हुने सबै खाले अपराध जन्य काम र भ्रष्टाचार अनि सबैखाले भ्रष्ट्राचार र अपराधलाई राजनितिकरण गर्ने अलोकतान्त्रिक निरंकुश मण्डले राजलाई जवसम्म आम नागरिक खुल्ला रुपमा विरोध गर्न सक्दैनन् तबसम्म देश र जनताले न्याय र स्वतन्त्रता पाउने छैनन्।
यो कुरा नेपाली राजनितिमा सबै रजनितिक दलमा देखिन्छ धेरै थोरै सबैले आफ्नो गल्ती बाट सचिनुपर्छ र लोकतान्त्रिक पद्धति बाट समस्याको समाधान गरिनुपर्छ।
अन्तमा आज नेकपा का तत्कालीन नेता मदन भण्डारी र जिवराज आश्रीत मारिएको भनिएको दिन उहाँहरु प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली छ। नेकपाकै बलियो सरकार भएको बेला दुर्घटना वा हत्या के हो ?
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रम ‘रामायण’ जस्तै : प्रदेश सांसद श्रेष्ठ
वास्तविक छानवीन गरि कानुनी दायरामा ल्याइयोस् अपराध गर्नेलाई । साथै सबै खाले अपराध र भ्रष्टाचार जन्य काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हिम्मत गरोस यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले।
नेपाली राजनीतिमा सेटिङगमा लुटिखाने नेता कार्यकर्ताको धन्दा तुरुन्त बन्द गर ।
(नेता अधिकारी नेपाली काँग्रेस तनहुँका पूर्व जिल्ला सदस्य तथा साविक थप्रेक गाविस उपाध्यक्ष)
थप ३ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २७६ पुग्यो
कतारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ८ नेपालीले पाए आममाफी
गण्डकी प्रदेशमा बिहानै थपिए १६ जना कोरोना सङ्क्रमित
गरिमा बिकास बैंकद्धारा जिप्रका स्याङ्जालाई पीपीई हस्तान्तरण
विदेशबाट फर्कनेलाई रोजगारको व्यबस्था गरौं : प्रदेश सांसद मल्ल
स्याङ्जाको कालिका अस्पतालमा वाईफाई र टेलिभिजन सहितको आइसोलेसन
आज विहीबार, अति शुभ छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
अन्ततः निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार, कर बुझाउने म्याद असार ७ सम्म थप
मात्र एक कचौरा पानीले रातारात बदलिदिनसक्छ तपाईको भाग्य (भिडियो)
काेराेना संक्रमणबाट थप एककाे मृत्यु, संक्रमितकाे संख्या २३ सय
नेपालमा काेराेना सँक्रमितकाे संख्या २३ सय पुग्याे, २४ घण्टामा २०१ जना थपिए
नेबिसँघ स्याङ्जाले बुझायो सिडिओलाई ज्ञापन पत्र